Oday Dhaqameed Meydkiisa Laga Helay Deegaan Hoos Yimaada Degmada Ceelbuur * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Oday Dhaqameed Meydkiisa Laga Helay Deegaan Hoos Yimaada Degmada Ceelbuur
Muqdisho, Mareeg.com: Wararka ka imaanaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in shalay galab deegaan hoos yimaadda degmada laga helay meydka oday dhaqameed laga yaqaanay halkaas.
Maydka la helay ayaa magaciisa lagu sheegay Shire Diiriye Cismaan oo ka tirsanaa odayaasha dhaqanka degaanka Ceel-lahelay ee gobolka Galgaduud, waxaana meydkiisa laga helay deegaanka Carro-kaawada oo ka tirsan degmada Ceelbuur.
Cabdi Xasan Maxamed (Biyoquute) oo ka tirsan saraakiisha Ahlusunna ayaa u sheegay qaar ka mid ah warbaaahinta in saaqdii dhexe ee Khamiistii la soo dhaafay ay Al-Shabaab marxuumkaas kala baxeen gurigiisa, kadibna meydkiida lagu arkay deegaanka Carro-kaawada oo ka tirsan degmada Ceelbuur.
Biyoquute ayaa sheegay in dilka nabaddoonka uu ka dhashay khilaaf soo dhexgalay odayaasha dhaqanka deegaanka iyo Al-Shabaab, sida uu yiri, wuxuuna tilmaamay in waxa la isku khilaafay ahaayeen lacago Alshabaab dalbadeed oo dadka qaar diideen.
Degmada Ceelbuur oo ku taalla bartamaha Galgaduud ayaa ka mid ah meelaha sida weyn ay ugu xoogan yihiin Alshabaab, iyadoo la sheego iney halkaas ku leeyihiin taageerayaal farabadan.
Xuska Maalinta Qowmiyadaha Itoobiya Oo Maanta Ka Furmaya Magaalada Jigjiga